Shirkada DP World Oo Ganafka Ku Dhufatay Hadal Ka Soo Yeedhay Dawlada Djibouti | Baligubadlemedia.com
Shirkada DP World Oo Ganafka Ku Dhufatay Hadal Ka Soo Yeedhay Dawlada Djibouti
Shirkadda DP World ee Imaaraadka ayaa ganafka ku dhufatay hadal ka soo yeedhay dawladda Jabuuti oo ku saabsan in ay shirkadda reer Imaaraad ka iibsanayaan saamiga 33% ah ee ay ku lahayd dekedda Doorale taas oo ay dawladda Jabuuti si khasab ah uga eriday shirkadda bishii hore kadib muran soo kala dhexgalay.
Afhayeenka shirkadda DP World waxa uu sheegay in wararka saxaafadda laga sheegay ee ku saabsan in saamigooda la iibinayo waxba kala socon. Waxa uu gardarro ku tilmaamay falka Jabuuti kaga eriday shirkadda dekedda Doorale taas oo uu tilmaamay in ay tahay sababta ku kaliftay in ay maxkamadda Ingiriiska ku taal u dacwoodan.
Waxa uu sheegay in ay saamigooda xaq u leeyihiin, islamarkaana heshiis kasta oo lala galo gacan saddexaad noqonayso sharci darro, islamarkaana ku xadgudbayso xuquuq ay leedahay DP World waxaanay ku goodiday in cidda saamiga kula heshiisa Jabuuti ay sharciga la tiigsan doonan.
Abuubakar Xaddi guddoomiyaha dekeddaha iyo suuqa xorta ah ee Jabuuti ayaa Salaasadii wakaalladda Reuters u sheegay in ay dawlad ahaan qorsheeyeen in saamiga Dp World ay iibsadaan si looga baaqsado dacwadda London ay ka furatay DP World laakiin, waxay ku doodaysa shirkaddu in aanay jirin wax ka baajinaya dacwadda ay furatay.